टिप्स | युनिभर्सल खबर
Home बिबिध टिप्स
उठ्ने बित्तिकै कहिले पनि नगर्नुस् यी ५ काम (भिडियो रिर्पोट)
Posted By: युनिभर्सल खबरon: March 16, 2018 In: टिप्स, बिबिध
बूढा पाकाहरूले जीवनका बारेमा भनेका कतिपय कुराहरू वैज्ञानिक छन्। तर पछिल्लो समयमा मानिसहरू बूढा पाकाले भनेका जीवन सम्बन्धी महत्वपूर्ण कुराहरूलाई वास्ता नै गर्दैनन्। यहाँ त्यस्तै मान्यताको चर्...	Read more
तपाईंलाई कुनै केटीले मन पराउँछे कि पराउँदिन्, यसरी थाहा पाउनुस्
Posted By: युनिभर्सल खबरon: March 14, 2018 In: टिप्स, बिबिध
काठमाडौं । हरेक पुरुषलाई आफूसँग कुनै स्त्री आकर्षित हुन्छे कि हुन्ने भन्ने चासो र चिन्ता हुन्छ । तपाईं कुनै केटीले तपाइँलाई मन पराउँछे कि मन पराउँदिन भन्ने जान्न चाहनुहुन्छ भने यी कुरा विचार...	Read more
Posted By: युनिभर्सल खबरon: March 13, 2018 In: टिप्स, बिबिध
एजेन्सी । धर्ममा आस्था राख्नेका लागि ईश्वर सर्वशक्तिमान हुन् । ग्रह–नक्षत्र तथा देवी–देवता सबै ईश्वरको अधिनमा हुन्छन् । ईश्वर पछि प्रकृति महत्वपूर्ण हुन्छ । जसप्रकार प्रकृतिले रोग, शोक या अन...	Read more
Posted By: युनिभर्सल खबरon: March 11, 2018 In: टिप्स, बिबिध
मेष कार्यक्षेत्र : यो वर्ष ऊर्जा र संकल्पले भरिपूर्ण रहनेछ । कर्मक्षेत्रमा गरिएको निर्णयले राम्रा समाचार दिइरहनेछन् । आयमा वृद्धि भैरहनेछ । आर्थिक क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति जनाउने आधार तयार ह...	Read more
सकेसम्म त रक्सि नखाएकै बेस । रक्सि खाएपछि गरिने धेरै कामले तपाईको सम्बन्ध,जागिर तथा अन्य कुरा समेत भताभुंग हुनसक्छ । तेसैले सकेसम्म रक्सिको मात्रा मिलाएर आफ्नो शरीरले थेग्ने गरिमात्र खानुपर्...	Read more
दाह्री काट्दा यी कुरामा ध्यान दिनुस् :
Posted By: युनिभर्सल खबरon: March 11, 2018 In: टिप्स, बिबिध, स्वास्थ्य
काठमाडौं। दाह्रीलाई पुरुसत्वको परिचायक पनि भनिन्छ । कतिपयलाई दाह्रीजुँगा खौरिएर चिटिक्क परेको त कतिलाई भने दाह्रीवाल पुरुष पुरुष मन पर्नसक्छ । जसलाई दाह्री मन पर्दैनन् उनीहरुले दाह्री काटछन्...	Read more
बिवाह किन आवश्यक छ ?
Posted By: युनिभर्सल खबरon: March 09, 2018 In: टिप्स, बिबिध
स्त्री अनि पुरुष एक आपसमा नबाँधिउन त यस संसारलाई प्रकृतिले एकै गाँस पारेर निलिदिन्थ्यो होला । यस्तो हुन नदिन धेरै ऋषि मुनीहरुले हजारौं बर्ष तपस्यामा लिन हुनु पऱ्यो होला । स्वयं इश्वरलाई पनि...	Read more
यस्ता ७ व्यक्तिलाई कहिल्यै नगर्नुस् नमस्कार ! आफैंलाई पार्छन् आपत
एजेन्सी : जो कोहीलाई पनि भेट्दा हामीले नमस्कार गर्नु स्वभाविक र सामान्य कुरा हो । तर नमस्कार गर्दा केहि कुराको ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। जो पायो तेही र जस्तो पायो तेस्तो अवस्थामा नमस्कार गर्न...	Read more
फागुन २५ देखि चैत्र १ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
मेष साताको प्रारम्भमा विभिन्न चुनौती पन्छाउँदै विविध काम सम्पन्न गर्न सकिनेछ । सोमबारपछि नयाँ किसिमका योजना तर्जुमा हुन सक्छन् । प्रतिस्पर्धीहरूलाई सहजै पछि पार्दै विशेष कामको जग बसाइनेछ । म...	Read more
हरेक व्यक्तिका आ–आफ्नै चाहना हुन्छन् । त्यस्ता चाहनाहरु समय–समयमा प्रकट पनि हुन्छन् । प्राय हरेक पुरुषको एउटा समान चाहना हुन्छ, सुन्दर श्रीमती पाउनु । तर यो त जरुरी छैन कि सबैको यो चाहना पूर...	Read more